निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यस्तो छ समाधानको उपाय - jagritikhabar.com – jagritikhabar.com
निद्रा नलाग्ने समस्या छ ? यस्तो छ समाधानको उपाय
दैनिक खाली खुट्टा हिँड्नेः आफ्नो अवस्था हेरेर दैनिक करिब १० देखि १५ मिनेट खाली खुट्टा दुबो या घाँसमा हिँडडुल गर्दा फाइदा हुन्छ । अत्यन्तै मोटोपन, घुँडा वा खुट्टासम्बन्धी कुनै रोगका कारण सहज हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्था भएमा भने लठ्ठी वा अन्य मानिसको सहयोग लिएर हिँड्नु फाइदाजनक हुन्छ ।
पानीमा खुट्टा डुबाउनेः मनतातो पानीलाई केही गहिरो भाँडामा राखी थोरै नुन राखेर घोल्ने । त्यसपछि सो नुनपानीमा खुट्टालाई गोलिगाँठोभन्दा केही माथिसम्म करिब १० देखि १५ मिनेटसम्म डुबाएर राख्ने । त्यसपछि पानीबाट निकालेर खुट्टालाई नरम कपडाले सुक्खा बनाएर पुछ्ने ।
भ्रामरीः यो एक प्राणायाम हो, जसले मस्तिष्कलाई कम्पन वा झन्झनाहट दिन्छ । यसरी शरीरलाई शिथिल बनाउँछ र आराम दिन्छ । मुखभित्र जिब्रोलाई माथिपट्टि दोबारी तालुमा टँसाउने । त्यसपछि मुख बन्द गरी नाकले भमरा वा मौरीको जस्तो आवज निकाल्दै श्वासलाई नाकबाट बाहिर निकाल्ने । यो प्रक्रिया करिब नौ पटक दोहोर्याउने ।
पूर्ण आराम विधिः सर्वप्रथम शरीरका सम्पूर्ण अंगप्रत्यागंलाई स्वतन्त्र रुपमा खुला बनाउने । हातलाई शरीरभन्दा करिब १५ सेन्टिमिटरको दूरीमा राखी खुट्टालाई फट्याएर मृत शरीरको रुपमा ओछ्यानमा सुत्ने । सम्भव भएसम्म सिरानीको रुपमा अत्यन्तै पातलो नरम कपडालाई दोबारेर राख्ने । त्यसपछि आफ्नो शिरको पाउसम्मका सम्पूर्ण अंगलाई नछोडी सम्झिँदै जाने । सबै अंगमा आराम हुँदै गएको सूचना आफ्नो मस्तिष्कलाई दिँदै जाने । उक्त प्रक्रिया दोहोर्याउँदै जाने क्रममा हामी सहजै निदाउँछौँ ।